Waa 36 Saacadood Oo Fadeexad Ku Ah Kubbada Cagta Argentina & South America Iyo Kulankii Kubbada Cagta Ugu Waynaa Ee Finalkii River Plate & Boca Juniors Oo Jaho Wareer Waali Ah Ku Jira. - Gool24.Net
Waa 36 Saacadood Oo Fadeexad Ku Ah Kubbada Cagta Argentina & South America Iyo Kulankii Kubbada Cagta Ugu Waynaa Ee Finalkii River Plate & Boca Juniors Oo Jaho Wareer Waali Ah Ku Jira.
Labadii maalmood ee ugu danbeeyay waxaa ceeb iyo fadeexad wayn dhexda ugu jirtay kubbada cagta dalka Argentina iyo guud ahaan kubbada cagta qaarada South America kadib wixii ka dhacay kulankii lagu kala saari lahaa kooxaha colaada aduunka ugu wayni ka dhexayso ee River Plate iyo Boca Juniors.
Lugta labaad ee finalka koobka Copa Libertadores ee qaaradda Latin America ayaa habeenkii labaad baaqatay, kaddib markii ay taageereyaasha kooxda River Plate ee waddanka Argentina ay Sabtidii weerar ku qaadeen bas ay saarnaayeen laacibiinta naadiga ay aadka isku neceb yihiin ee Boca Juniors oo dhaawacyo ay gaadheen qaar ka mid ah ciyaartooyada iyo tababaraha.
Xidhiidhka kubadda cagta South America ee magaciisa loosoo gaabiyo CONMEBOL ayaa gaadhay go’aan dib loogu dhigayo ciyaarta oo ay ahayd inay qabsoonto Sabtidii laakiin dib loogu riixay Axaddii, waxaana uu xidhiidhku sheegay inuu aqbalay codsi uga yimid Boca Juniors oo ay ku dalbadeen in dib loogu dhigo kulankan maadaama ay ka dhaawacan yihiin ciyaartooyo uu ku jiro Kabtanka oo isha bidix waxyeello kasoo gaadhay xilligii la weeraray.
Shir ay yeesheen xubnaha CONMEBOL ayaa waxay kaga arrinsadeen qoraal uga yimid Boca Juniors oo ahaa in maadaama ay ciyaartooyo ka dhaawacan yihiin, kuwo kalena ay wax ku noqdeen sunta dadka kaga ilmaysiisa oo boolisku u adeegsadeen jamaahiirtii rabshadda samaynayey oo ay habeen hore oo dhan matagayeen, in aanay noqon karin ciyaar isku dheelli tiran, sidaa daraadeedna ay tahay in dib loogu dhigo.
“Madaxweynaha iyo golaha CONMEBOL waxay go’aansadeen subaxnimada Axadda in dib loo dhigo ciyaarta isku soo laabashada finalka CONMEBOL Libertadores 2018 sabab ah inaanu ilaalino isku-dheelli-tirnaanta ciyaaraha.” Sidaas ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed kasoo baxay CONMEBOL.
Maalinta Salaasada ayaa waxa fadhi yeelan doona Xidhiidhka kubadda cagta CONMEBOL iyo labada kooxood ee River Plate iyo Boca Juniors, waxaanay heshiis midaysan ka gaadhi doonaan waqtiga ay dhici doonto ciyaartu.
Maxaa dhacay Sabtidii
May ahayn habeen u wanaagsan kubadda cagta iyo kulamada waaweyn ee dunida oo dhan lagala socdo, waxaana wanaagsanaan lahayn inay dhacdo masiibo dabiici ah oo aan khasaare badan geysan, halka hadda ay taageereyaal marti loo ahaa oo xamaasad iyo colaad ka buuxdo weerar ku qaadeen laacibiin iyo tababareyaashoodii oo garoonka soo gelaya, halkaana ay ugu geysteen waxyeello.
Finalka Copa Libertadores waxa la ciyaaraa laba kulan oo guri ka guri ah, ciyaartii hore oo ka dhacday garoonka kooxda kubadda cagta Boca Juniors ayaanay 2-2 ku kala baxeen inkasta oo markaasna hal habeen dib loo dhigay ciyaarta kaddib markii garoonka uu qariyey qiiq iyo jewi aan wanaagsanayn oo magaalado madaxda dalkaas.
River Plate ayaa oo nasiib u yeelatay in iyadoo marti ah ay barbar dhac lasoo gasho Boca Juniors laba usbuuc ka hor, ayaa waxay Sabtidii isku diyaarisay in gegideeda El Monumental ay kusoo dhoweyso Boca, hase yeeshee ka hor intii aanay ciyaartooyada dharka buluugga ah xidha soo gelin garoonka ayaa waxa baskii ay saarnaayeen weeraray taageereyaasha River Plate oo marka horeba boolisku ka qabsi qabeen inay sidan samaynayaan.
Waddada soo gasha garoonka El Monumental ayaa la xidhay, lagana joojiyey baabuurta, si aanay u dhicin dhibaato amaba loo ilaaliyo ammaanka ciyaartooyada, hase yeeshee taageereyaasha oo kumannaan ah ayaa xidhay halka uu basku ka geli lahaa garoonka, waxaanay mar kaliya bilaabeen in wixii gacantooda ku jira ay ku tuuraan baska.
taasina waxay keentay dhaawac soo gaadhay tababaraha, hase yeeshee booliska oo isku dayayey inuu badbaadiyo ciyaartoyga ayaa furay sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo qiiq kale, taas oo iyaduna dhibaato ku noqotay ciyaaryahannada.
Muuqaallo laga soo qaaday qaar ka mid ah ciyaaryahannada ayaa argagax ku riday adduunka oo dhan.
Intaas kaddib ayaa xidhiidhka kubadda cagta CONMEBOL waxa uu sheegay in Axadda 11:00 pm xilliga Geeska Afrika ay ciyaartu qabsoomayso, hase yeeshee ugu dambayn, waxa dib loo dhigay ciyaarta xilli aan la shaacinin.
Halkan ka daawo muuqaal laga duubay weerarkii baska